Dowladda Oo Ka Hadashay Geeridii Ku Timid R/Wasaarihii Hore Ee Somalia |
HomeWararkaDowladda Oo Ka Hadashay Geeridii Ku Timid R/Wasaarihii Hore Ee Somalia
Dowladda Oo Ka Hadashay Geeridii Ku Timid R/Wasaarihii Hore Ee Somalia
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa ka hadlay geerida ku timid Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Carte Qaalib.
Mahdi Guuleed oo qoraal soo saaray ayaa tacsi u diray Qoyska, qaraabada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Marxuum Cumar Carte oo muddooyinkii dambe ku xanuusanayay Magaalada Hargeysa.
Sidoo kale Mahdi Guuleed oo Marxuum Cumar Carte ku tilmaamay inuu ahaa Oday guurti ah oo door muuqda kaga jira sooyaalka dalka Soomaaliya, isla markaana uu tacab badan geliyay dalka.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa sheegay in Cumar Carte Qaalib uu ka qayb qaatay dib u heshiisiinta dadka si waddaniyad iyo daacadnimo leh.
“Waxaan tacsi u dirayaa Qoyska, qaraabada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Allahu naxariistee marxuum Cumar Carte Qaalib. Wuxu ahaa Oday guurti ah oo door muuqda kaga jira sooyaalka dalkeenna.
marxuumka Wuxu soo noqday Ra’iisalwasaare sidoo kale Wasiirkii arrimaha dibadda. Marxuumku tacab badan ayuu gashaday dalkiisa, wuxuuna ka qayb qaatay dib u heshiisiinta dadka, si waddaniyad iyo daacadnimo leh ayuuna shacabka Soomaaliyeed ugu soo shaqeeyay. Waxaan alle uga baryayaa inuu naxariistiisa Janno ka waraabiyo” ayuu yiri Mahdi Guuleed.
Muddooyinkii lasoo dhaafay ayuu Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Carte Qaalib ku xanuunsanayay Isbitaal ku yaalla Hargeysa, isagoo xanuunkii haayay uu goordhaweyd u geeriyooday.